नाम मात्रै कमाएर हुन्छ बिवाह गरेर सन्तान जन्माउनु पर्दैन, भन्दै गायक राजेश पायल राइकी हजुरआमाले दिईन कडा द’वाव (भिडियो सहित)
Homeसमाचारनाम मात्रै कमाएर हुन्छ बिवाह गरेर सन्तान जन्माउनु पर्दैन, भन्दै गायक राजेश पायल राइकी हजुरआमाले दिईन कडा द’वाव (भिडियो सहित)
March 1, 2021 admin समाचार 5082
गायक राजेश पायल राईले आफ्नो मामा मावलीलाई स’म्झंदै मावलीघर पुगेका छन् । झण्डै ३० वर्ष उनी मावलीघर गएका हुन् । राजेशले त्याहाँ आफ्ना सबै बाला’पनलाई स्मरण गरेका छन् । उनले बालापनमा मामाघरमा दशैंको टिका ल’गाएपछि आफ्ना भाईहरु र आफुले कतिकति पैसा पायौं भनेर घरदेखि पर बारीको छोउमा बसेर पैसा गनेको पनि सम्झिए । मामाघरको आँगनमा उ’भिएर गायक राजेशले आफ्नो बालापनको धेरै कुरा स’म्झिए ।
उनले त्याहाँ क’तिपयि बालापनमा गरेका कुराहरु बि’र्सिए पनि तर उनका मामाहरु र मावलीका दाईहरुले उनलाई ती कुराहरु स्म’रण गराए । एकजना मामाले त राजेशले सानैमा मामाघरको छानोमा उभिएर गीत गाएको र त्यसपछि आफुले आफ्नो नाम ‘रापा राई’ राख्ने भनेर आफुलाई सु’नाएपछि राजेशलाई नामको सर्टफम राख्नुभन्दा फुु’लर्फम नै राख्नु भनेर आफुले सुझाव दिएको कु’रापनि स्मरण गराए ।
माईजुले राजेशलाई भनिन्,‘अब बिहे गर्नु पर्छ । समय घर्कि सक्यो । तिम्रो बिहे खान पाईन्छ कि भ’न्दाभन्दै धेरैजना बिति’सक्नु भयो । अब मेरो पनि पालो आई राखेको छ । मलाई बिहे कहिले खुवाउँछौं ?’ माई’जुले राजेशलाई प्रश्न गर्दै भनिन्,‘अब तुरुन्तै बिहे गर है भान्जा । दुई छोरा र दुई छोरी त्योपनि जु’म्ल्याहा जन्मा’उनु पर्छ तिमीले ।’
माईजुको कुरा सुनेर अनि बिहे’कोलागी दबाब दिएको देखेर राजेश पायल छ’क्क परे । उमेरले १०० पुगेकी माईजुले बिहे’कोलागी दबाब दिंदा राजेशले चुप लागेर हस् भन्नु बाहेक अरु उनीसंग कुनै उपायपनि थिएन । जे’होस् उमेर खाएर बसेका राजेशलाई उनका माव’लीले पुग्नेगरी आर्शिबाद दिएका छन् । के राजेशको अब बिहे हुन्छ होला त ? के राजेशले जुम्ल्याहा सन्तान नै जन्मा’उँछन् होला त ? यो प्रश्नको जवाफ तब उनका द’र्शकहरुले पाउँनेछन् जब राजेशले बिहे गर्नेछन् । इताजा खबरबाट
बाँकी कुरा भिडियोमा छ ।
May 12, 2021 admin समाचार 4350
May 26, 2021 admin समाचार 4268
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) खान पानमा बिशेष सा’बधानी अपनाउनु होला । आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्य परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ । स्वास्थ’मा सामान्य
August 24, 2020 admin समाचार 20742